Exclusive Golf Grove Dubai Hills by Emaar - Dubai Real Estate by Provident
Toeram-pialantsasatra ivelan'i Dubai avy any Emaar
Exclusive Golf Grove Dubai Hills an'ny Emaar - Jereo ireo safidy mahagaga izay ananantsika amin'izao fotoana izao amin'ny antsika Bola
Emaar manolotra Golf Grove any Dubai Hills
Toerana iray tsy manan-kialofana izay voahodidin'ny toeram-piantsonan'ny fiara fitaterana, Golf Grove dia fofona avy amin'ny rivotra madio avy amin'ny hatezeran'ny fiainana andavanandro. Miorina ao amin'ny fiaraha-monina mifantoka amin'ny fianakaviana, ny trano 3 sy 4 efitrano malalaka dia manomboka amin'ny 2930 sq ft - 3365 sq ft fandriampahalemana sy fahamendrehana.
Dubai Hills Estate nataon'i Emaar
Loha laharana ao Dubai
Ao afovoan-dalan'ny trano fonenana mpanatanteraka dia mijery ny toeram-ponenan'i Dubai Hills. Nearby amenities include:
15 Mitohy mankany Downtown Dubai
20 Minitra any amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Dubai
#ExecutiveResidencesDubai ny mpampiasa amin'ny vanim-potoana vaovao amin'ny fandraharahana any amin'ny Emirà Arabo Mitambatra. Izy io dia mitondra fifandanjana be eo amin'ny trano fonenana sy trano fonenana avo lenta. Ny trano fonenana mpanatanteraka dia tsy hoe ny fanatsarana ny paradigma 'asa-live-play' sy ny hitondrany azy any amin'ny heva vaovao. Ny tapakila mitazona anao amin'ny fiainana izay tianao foana hiaina ao amin'ny Exclusive Golf Grove Dubai.
Golf Grove any Dubai Hills Estate nataon'i Emaar
Ny asa any an-trano dia manaporofo fa afaka mandany fotoana be dia be ianao, vitsy ny zavatra mahavarimbariana ary ny fifandimbiasana eo amin'ny fiainana. Ankoatra izany, ny orinasa vao napetraka ao amin'ny trano fonenana mpanatanteraka dia manome anao ny Exclusive Golf Grove Dubai.
Ny tombontsoa rehetra an'ny orinasan-tserasera DMCC
0% Fananana ara-bola manokana sy ara-bola
42% Discount eo amin'ny lisansa momba ny varotra anao
15,000 + orinasa ho an'ny tambajotra ao anatin'ny Business Hub
Ara-drariny ho an'ny olona tsirairay sy ny fianakaviana, ny tranon'ireo mpanolo-tsain'ny mpanolo-tena dia manana ny herinao rehetra. Ny tranobe dia miorina amin'ny toeram-piantsenana maoderina voamarina ary manasa toerana malalaka izay manamora ny fiheveran'ny fiarahamonina matanjaka kokoa. Toerana tsara indrindra hiasa, hiaina, ary hilalao.
ny Golf Properties for Sale
Top Properties Emaar Beachfront Sale
Jereo ny Emaar Atsimo-Side Properties for Sale
Tags#dubaihillsdubai trano fonenanaReal estate dubai
Previous PostPrevious Ny fahafaha-manararaotra ao Angletera ho an'ny mpampiasa vola
Next PostManaraka Central Park any an-tanànan'i Meraas